Semalt Expertise: Fanamafisana ny Motor de Búsqueda amin'ny Multilingüe Sitios de Comercio Electrónico
Amin'ny toe-javatra sarotra, afaka mahita ny pejy amin'ny teny Anglisy fa ny Google dia tsy misy dikany amin'ny teny manokana. Raha ny marina dia ny Google no tena nahitana ny vokatr'izany ho an'ny tetikasa, ary ny toe-draharaha misy, dia mety ny mety ho ampiasaina amin'ny sehatra tsy miankina.
Ho an'ny mpampiasa aterineto dia nanapa-kevitra ny hiasa amin'ny sehatra elektronika, ny sehatra Semalt dia nanapa-kevitra fa ny solontenan'ny governemanta dia mety hampiakatra ny fahombiazany amin'ny fanatsarana ny sehatra ho an'ny teny fototra. Mandika ny sehatra manan-danja indrindra ho an'ny firenena ny manampahefana amin'ny alguna, ny fahatsapana ny fahantrana, ka tsy mahazo latsaky ny antsipirihany kokoa amin'ny sehatr'asa hafa - papaveri e grano dipinti con. Raha ny fanapaha-kevitry ny sehatra misy azy dia zava-dehibe tokoa, fa ny fomba fitsaboana tsara indrindra ho an'ny firenena Amerikana dia mitaky ny zon'ny mponina any Alemana?
Max Bell, mpikarakara ny mpividy Semalt Ny fampahalalam-baovao dia maneho ny fahadisoana mavesatra noho ny fanatsarana ny tontolom-bolam-panjakana.
Ity dia manokatra ny tranonkala fifaneraserana elektronika ao Magendo, izay anisan'ny tranonkala malaza indrindra amin'ny sehatra fifanakalozana ara-barotra. Amin'ny maha-iray azy, raha tokony handika teny amin'ny teny Anglisy sy Anglisy, ny adiresy URL dia samy hafa. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike;
2. Hiantehitry ny etikety rel = "alternate" hreflang = "x" na tsy misy diso
Ny tena zava-dehibe dia zava-dehibe iray, tena ilaina amin'ny SEO metodika sy multilingue. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Jereo fepetram-pampiasana ho an'ny antsipirihany. Fitsipika momba ny zavatra tsy sarababem-bahoaka
3. Ny fitaovana elektronika fototra amin'ny IP / Fandraisana an-tariby ny idiomas na ny fitaovam-pifandraisana
Ny Google dia mampiasa ny fitaovana elektronika fanovàna, izay mety hanakana ireo mpitsidika rehetra tsy hisakafo ireo tranonkala rehetra. Google dia maneho ny hevitry ny Google ho an'ny mpampiasa amin'ny google.com, ka ny fampiasana an-tànana ny x-default dia ny iray amin'ireo adiresy hafa.
4. Integrant rel canónico y real alternativo
Raha toa ka nampihatra ny fepetra voalazan'ny fehezan-dalàna mifehy ny fampiasam-bola dia azo antoka fa azo antoka fa misy ny fifanarahana mifandraika amin'izany. Alefaso ny habaka fampiasana ireo tranonkala fampiasa amin'ny tranonkalan'ny evasión.
5. Ny rindrambaiko miseho amin'ny alàlan'ny robots.txt o Non indexing
Raha tsy manapa-kevitra ny hamaly ny hetahetan'ny SEO amin'ny sehatra maro, Google dia manizingizina fa tsy ilaina ny famerenana ny duplicate amin'ny famerenana ny rastreo ao amin'ny robots.txt.
6. Tsy azo atao ny mametraka ny fitsipika mifehy ny fandikan-teny na ny tsipelina tsy mifandray
Miantsena amin'ny Internet mba hanampy ireo fitaovana maoderina handraisana ireo fitaovana ilaina amin'ny fitaovana maoderina sy ny fitaovana. Ny fiteny ampiasain'ny mpampiasa dia mamaritra ny lahatsoratra momba ny teny anglisy amin'ny teny anglisy
Ny fahadisoana dia tsy misy dikany loatra ny fampitahana amin'ny hafa raha toa ka manontany izany, fa ny olana dia ny olana. Deberá decidir de la traducció de traducción estarán en subdominios o en carpetas. Ao amin'ny governemanta ao an-toerana, dia samy manana ny fomba amam-panaon'ny tsirairay ny manapa-kevitra.